Hiarahany amin’ireo distrika enina misy ny hetsika ka any amin’ny Boriborintany fahenina misy an’Ambohimanarina no hisantarany izany anio maraina, hihazo ny digy hipaka hatrany amin’ny Boriborintany voalohany. Ankoatra izay dia ho hentitra ihany koa izy ireo amin’ny fitandroana ny fandriampahalemana. Hisy mantsy ny fananganana ny vaomieran’ny fandriampahalemana eny ifotony izay ahitana olona folo isam-pokontany. Hozaraina badge sy telefaonina tsirairay izy ireo ny alatsinainy ho avy izao hahafahana mifandray aminy. Nomarihin’ny lehiben’ny Faritra Analamanga Rakotonanahary Ndranto moa fa tsy amin’izao fandraisana ny frankofonia izao ihany no hanaovana ny asa fanadiovana fa mila mandray ny andraikiny ny tsirairay.